Aabe Gabadhiisa ku biirtay Daacish oo Codsi Qiiro leh u diray Dowlada Britain (Sawirro) | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Aabe Gabadhiisa ku biirtay Daacish oo Codsi Qiiro leh u diray Dowlada...
Aabe Gabadhiisa ku biirtay Daacish oo Codsi Qiiro leh u diray Dowlada Britain (Sawirro)
Aabaha dhalay Shamima Begum oo ku biirtay Kooxda Daacish iyada oo 15-sano jir ah sanadkii 2015-kii, ayaa ka codsaday dowlada Britain in gabadhiisa loo ogolaado in mar kale kusoo laabato Britain.
Axmed Cali oo 60-sano jir ah ayaa raali galin ka bixiyay ku biiritaankii gabadhiisa ee kooxda Daacish, waxa uuna sheegay in gabadhiisa markii Daacish ku biireysay ay aheyd gabar aan qaan gaarin oon wax badan kala og.
Waxa uu ka codsaday dowlada in gabadhiisa oo hada ku dhibaateesan xero qaxooti oo kutaala dalka Siiriya in loo ogolaado in Britain kusoo laabato ayna dowlada xitaa ku ciqaabto dambiga ay gashay.
”Wey qaldaneyd gabadheeda, raali galin ayaana ka siinaya qof kasta oo British ah iyo dowlada, waan ka xumahay waxa ay sameesay Shamima ,waxaana ka codsanyaa qof kasta oo British ah in uu cafiyo gabadheeda, waxa ay aheyd markii la duufsanayay ay ku biireysay Daacish mid aan qaangaarin oon caqli badan laheyn” Ayuu yiri aabaha dhalay gabadha Daacish ku biirtay.
Shamima Begum iyada iyo labo gabdhood kale oo iskuuley ahaa ayaa sanadkii 2015-kii bu biiray kooxda Daacish, waxaana gabadhan guursaday dagaalyahan katirsan kooxda Daacish oo u dhashay dalka Holand kaa ay u dhashay sadex caruur ah oo ka saqiirtay.
Sheekada gabadhan ayaa Warbaahinta Britain qabsaay kadib markii Wariye katirsan Wargeysa The Times uu si lama filaan ah kula kulmay xero qaxooti, waxa uuna ka qaaday Wareysi ay ku codsaneysay in loo ogolaado in Britain ku laabato.
Shamima ayaa xiliga ay wareysiga bixineysay laheyd uur 9-bilood ah, waxa ayna maalmo kadib xerada qaxootiga ku dhashay wiil ay u bixisay Jerah, wiilkan yar ayaan 18-maalmood kadib xerada ugu geeriyooday xanuun dhinaca samsabada ah.
Dowlada Britain ayaa diiday in gabadhan mar kale dalka dib ugu soo laabato, waxa ayna taasi badalkeeda dowlada Britain gabadhaasi kooxda Daacish ku biirtay kala noqotay dhalashada.
Warbaahinta dalka Britain ayaa aad u hadal haya geerida ku timid wiilka ay dhashay gabadhan lagala noqday dhalashadii Britain, waxaana dowlada lagu eedeeyay in ay sabab u noqotay geerida wiilkaasi iyo xaalada hada heesata Shamima.
Afhayeen u hadlay Xukuumada Britian ayaa musiibo ku tilmaamay geerida wiilka ay dhashay Shamima, waxaa sidoo kale geerida wiilkan yar ka hadlay siyaasiyiin iyo Xildhibaano dowlada katirsan.
Codsiga uu dowlada Britain u diray aabaha dhalay Shamima ayaa dad badan dareenkooda badalay, waxaana socda codsiyo ay dad badan uga dalbanayaan in dowlada Britian dalka dib ugu soo celiso gabadhaasi ku biirtay kooxda Daacish.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Ka Hadashay Shilka Diyaaradeed ee Ethiopian Airline
Next articleFBI-da oo baaritaan wada kadib saraakiil Ilhaan ku eedeeyey argagixisanimo
Waligaa ma isweydiisay halka uu ka soo faracmay shaaha aad maalin kastaa cabtid?
AKHRISO: Muxuu yahay qodobka Ugu muhiimsan ee looga hadlayo Shirka Baydhabo…
Beesha caalamka oo warqad xasaasi ah u dirtay gudiga doorashada Jubbaland
XOG: Shirkad Lacag Ku Leh Maamulka Degmo Ku Yaalla Muqdisho
Dhageyso:-Madaxweyne Xaaf”Dowladda Federaalka Waxan U Sheegayaa Haddii Galmudug Gubato, Xamar Nabad Ahaan Mayso”
DEG DEG: Gudoomiyaha Aqalka Sare oo loo diiday in uu ka dhaafo Garoonka Aadan Cadde & Bahdilaad Yaab leh..
Toogasho ka dhacday Isgoyska Baar Ismaaciil Ee Degmada Afgooye & Qofka La Dilay Waxa Uu Ahaa
Akhriiso”Al-Shabaab oo war kasoo saartay khariidaddii Itoobiya ee laga tiray Soomaaliya
Waddamada qaaradda Aasiya oo wajahaya mowjad labaad oo ah cudurka Coronavirus
LA OGAADAY: Kheyre oo Fulinaya Qodobo ka Mid Ah Heshiiskii DFS Iyo Hirshabeelle